Máy ép chậm Kalite có tốt không? Review Top 4 máy ép chậm bán chạy nhất | Muasalebang - Muasalebang
Đang Đọc: Máy ép chậm Kalite có tốt không? Review Top 4 máy ép chậm bán chạy nhất | Muasalebang in Muasalebang
I-Kalite Slow Juicer Idume kakhulu emakethe futhi muva nje inkampani ye-PR inamandla impela emigqeni yomkhiqizo wayo enezinyuso eziningi ezikhangayo.
Kodwa lokho abasebenzisi abakunakekelayo ikhwalithi ye-juicer epholile ye-Kalita, ingabe inhle, izinzile, futhi iyini iwaranti? Uma futhi ubheke uku-oda i-juicer ehamba kancane yomndeni wakho, sicela ubheke ukubuyekezwa kwemikhiqizo yomkhiqizo we-Kalite kuqala ukuze ukhethe umkhiqizo ofaneleka kakhulu!
1 1. Ulwazi lomkhiqizo we-Kalite
1.1 I-Kalite iwuphawu lwaliphi izwe?
1.2 Imigqa yomkhiqizo eyinhloko yenkampani
1.3 Inqubomgomo yewaranti yamajusi ahamba kancane i-Kalite
2 Ingabe ama-juicer e-Kalite ahamba kancane alungile?
2.1 Idizayini ye-slow speed juicer Kalite
2.2 Isakhiwo se-juicer ye-Kalite
2.3 Indlela yokusebenza ye-slow speed juicer Kalite
2.4 Ukucindezela ubuchwepheshe bomshini weKalite
2.5 Khama i-pulp, ukhiqize ijusi eyengeziwe ngenxa yomthamo omkhulu womshini
2.6 Izinga eliphezulu lokuphepha
2.7 Ilula futhi kulula ukuyisebenzisa futhi ihlanzekile
3 Zingaki izinhlobo zamajusi ahamba kancane we-Kalite akhona?
4 2. Linganisela ama-juicer ahamba kancane angu-4 aphezulu e-Kalite ongawathenga namuhla
4.1 2.1. Buyekeza i-Kalite Mini Slow Juicer KL-530
4.2 2.2 I-Kalite KL-550
4.3 2.3 I-Kalite KL-565
4.4 2.4 Kalite KL 598
1. Ulwazi lomkhiqizo we-Kalite
I-Kalite iwuphawu lwaliphi izwe?
I-Kalite wuhlobo oludumile lwase-Australia (Australia). Lo mkhiqizo ugxile kakhulu ekusabalaliseni izinto zikagesi zasendlini.
Inkampani ihlale ibuyekeza ubuchwepheshe obusha ukuze ihlangabezane nezidingo ezahlukahlukene zabathengi. Ngaphandle kwalokho, imikhiqizo inokuqina okuphezulu, ukusebenza okuzinzile, awekho amaphutha ngesikhathi sokusetshenziswa.
Iningi lemikhiqizo ye-Kalite ikhiqizwa eThailand ngoba imboni nemigqa yokukhiqiza itholakala kuleli zwe. Eminye yemigqa emisha, ethengekayo yenziwa e-China. Kodwa-ke, kungakhathalekile ukuthi iyiphi indawo yokusebenzela, imishini nayo yenziwa ngobuchwepheshe base-Australia.
Ngakho-ke, ungaqiniseka lapho u-oda imikhiqizo yomkhiqizo we-Kalite, ikakhulukazi umugqa we-juicer ohamba kancane we-Kalite. Lona umugqa womkhiqizo othengiswa kakhulu wenkampani, ocutshungulwa e-GuanDong Jiaolong Electric Appaiances Co.,LTD.
Imigqa yomkhiqizo eyinhloko yenkampani
Njengamanje, uhlobo lwe-Kalite lusabalalisa izinhlobonhlobo zemikhiqizo yasendlini njengama-fryer angenawo uwoyela, ama-hotpot anemisebenzi eminingi, ama-rice cooker, imishini yobisi lwamantongomane, izingqimba zamaqanda, njll.I-juicer ye-Kalite slow iwumugqa womkhiqizo othengiswa kakhulu. Njengamanje, ama-juicer ahamba kancane athengiswa eVietnam, abasebenzisi banga-oda imikhiqizo yangempela yenkampani kumasayithi ahlonishwayo e-e-commerce!
BONA IMIKHIQIZO YETHU LAPHA
Inqubomgomo yewaranti yamajusi ahamba kancane i-Kalite
Uma uthenga i-juicer yangempela ye-Kalite ehamba kancane, uzojabulela inqubomgomo yayo yewaranti kuze kube iminyaka engu-2. Uma kukhona izinkinga, udinga nje ukuxhumana nomsabalalisi wangempela we-Kalite futhi uzosekelwa abasebenzi bezobuchwepheshe!
Ulwazi mayelana nezikhungo zewaranti ye-Kalite eVietnam
Ikheli: Hanoi – Vietnam: UKG Building – No. 188 Le Lai, Ha Cau, Ha Dong, Hanoi
Ho Chi Minh – Vietnam: 112/6 Pham Van Bach, Ward 15, Tan Binh District, Ho Chi Minh City Inombolo yocingo: 0867 891 706
Ingabe ama-juicer e-Kalite ahamba kancane alungile?
Idizayini ye-slow speed juicer Kalite
Amajusi ahamba kancane akhiqizwa iKalite anemiklamo ethambile nenhle enemibala eminingi eyahlukene, elungele indawo yekhishi lakho, izintandokazi zabasebenzisi ezifana nokuluhlaza, okuluhlaza, okuluhlaza okwesibhakabhaka. , okumnyama, okumpunga okusiliva,…
Ngaphezu kwalokho, ifreyimu ye-chassis yenziwe ngezinto ezisezingeni eliphezulu, eziqinile, eziqinile, ezihlala isikhathi eside, aziklwebheki ngemva kwesikhathi esingu-1 sokusetshenziswa. Umkhiqizo uqinisekisa ukuphepha komsebenzisi futhi wenze kube lula ukuwuhlanza ngemva kokusetshenziswa.
Isakhiwo se-juicer ye-Kalite
Ifakwe injini enamandla amakhulu.
Izilimo eziyizigaxa ezikhanyiwe
Ifakwe i-juicer yedayimane, okwenza inqubo yokugaya ibe lula, ikhiphe izinsalela, ilethe amanzi izikhathi ezingu-1.5 ngaphezu kwe-juicer evamile.
Ngokuya ngemodeli, iKalite ifakwe ama-blade ahlukahlukene emishini yayo.
I-squeegee ye-Kalite ifakwe izinto zokusebenza ezisezingeni eliphezulu, iqinisekisa ukuthi ususa izinsalela, amanzi okuphuza amnandi, futhi akukho kungcola.
Ishubhu lembali le-Kalite juicer slow ngokuvamile linobubanzi obukhulu obungaba ngu-7cm-8cm, elingakhama sonke isithelo noma imifino emshinini, ngaphandle kokusikwa sibe yizicucu ezincane, konga isikhathi.
Ithreyi yokukhama + Ithreyi yokukhipha
I-juice catcher yakhelwe ukubamba inani eliphakeme leziphuzo, ukugwema ukumosha.
I-tray yemfucuza iklanyelwe ukugwema ukuvala futhi kulula ukuyihlanza.
Ngaphezu kwalokho, isivalo sinama-gaskets enjoloba eyengeziwe, okuqinisekisa ukuvala okuqinile, ukugwema ukuchithwa ngokweqile kweziphuzo.
Indlela yokusebenza ye-slow speed juicer Kalite
I-Kalite fruit press isebenza ngomgomo wokugaya ugqoko. Uma isithelo sifakwa kudivayisi, isikulufu siyazungeza ukuletha okubalulekile kumanetha okuhlunga. Inqubo yokucindezela isithelo cishe ayidali amandla e-centrifugal kanye nokungqubuzana, okukhawulela inqubo yokukhiqiza ukushisa. Ngakho-ke, ama-enzyme, amavithamini kanye nezakhamzimba ezisesithelweni azithinteki. I-elementi yesihlungi izohlukanisa okusele ngaphandle futhi ijusi izongena.
Ukucindezela ubuchwepheshe bomshini weKalite
Ikakhulukazi, ubuchwepheshe obunamalungelo obunikazi bokucindezela kancane “JMCS” (Journal of Mathematics and Computer Science), ngesivinini esicindezelayo esingafika ku-65 rpm. Uphuza ijusi ngaphandle kokuzizwa ucindezelekile, unensalela, ugcina ukunambitheka, ugcina amavithamini amaningi, ama-enzyme nemibala yemvelo izikhathi ezi-4 kunamanye ashibhile aphuza kancane emakethe.
Khama i-pulp, ukhiqize ijusi eyengeziwe ngenxa yomthamo omkhulu womshini
Imikhiqizo ye-juicer epholile ye-Kalite ifakwe i-screw shaft enkulu yokucindezela, isivinini esicindezelayo esingu-50-60 rpm, umthamo we-200-400W kuye ngokuthi hlobo luni lomshini. Ngakho-ke, uzokwazi ukuphuza izinkomishi zejusi yezithelo ngokushesha nangaphezulu, kuyilapho uqinisekisa u-100% we-ukunambitheka, i-90% yamavithamini esithelo.
Izinga eliphezulu lokuphepha
Iphuzu elilodwa abasebenzisi abalithandayo lapho besebenzisa i-juicer ehamba kancane ye-Kalite ukuthi umshini uzinzile kakhulu, usebenza kahle, awubangi umsindo, uthinta wonke umuntu oseduze.
Umshini futhi unesisekelo senjoloba esakhelwe ngaphakathi esinamathela etafuleni, ishalofu ukukhawulela inqubo yokuzamazama, ukuchaphaza kwamanzi noma ukuphuka.
Idizayini yekepisi yerabha ye-Smart Cap, isiza ukuvimbela ukuvuza ngesikhathi sokucindezela, ukugcina umzimba nendawo ezungezile ihlanzekile.
Umshini ufakwe izinhlobo ezi-4 zokuhlunga ezinezikhala ezifanele izinhlobo ezahlukene zokudla.
Ngaphezu kwalokho, umshini usebenza kuphela uma ubeka isivalo nomzimba ndawonye. Ngakho-ke, umsebenzisi uzophepha ngesikhathi sokusebenzisa umshini.
Ilula futhi kulula ukuyisebenzisa futhi ihlanzekile
Lawula ngomsebenzi wokuvula/ukuvala bese uhlehlisa imodi yokuzungezisa ukuze uvimbele izithako ukuthi zingabambeki phakathi nenqubo yokugaya.
Izingxenye kulula ukuziqaqa, kulula ukuzigcina futhi zizihlanze
Zingaki izinhlobo zamajusi ahamba kancane we-Kalite akhona?
I-Kalite brand yethulwe emakethe yaseVietnam ngochungechunge olu-5 olulandelayo lwama-juicer ahamba kancane:
I-Kalite KL-530: umthamo we-200W
I-Kalite KL-550: umthamo we-240W
I-Kalite KL-565: umthamo we-240W
I-Kalite KL-598 umthamo we-400W
I-Kalite KL-599: umthamo we-400W.
2. Linganisela ama-juicer ahamba kancane angu-4 aphezulu e-Kalite ongawathenga namuhla
Ngokuqinisekile uzozibuza ukuthi iyiphi i-juicer ehamba kancane ye-Kalite okufanele uyithenge? Ngakho-ke ngizobuyekeza ngokuningiliziwe imikhiqizo yenkampani ethengiswa kakhulu ukuze abantu bakwazi ukukhetha kalula.
2.1. Buyekeza i-Kalite Mini Slow Juicer KL-530
I-Kalite KL-530 iyi-juicer ehamba kancane efanelekile kakhulu imindeni emincane nezikhala ezincane. Umshini wokunyathelisa we-Kalite KL-530 ugqama ngethoni ethambile ekhanyayo eluhlaza okwesibhakabhaka.
Amandla: 200 W
Ishubhu yokudla: 45 mm
Isitsha esikhulu: i-ABS4
Izesekeli: 304. anezikhala zokuhlunga insimbi engagqwali
Isivinini: isivinini esingu-1, ngokuzungezisa okubuyela emuva
Imodi ephephile: Isisekelo esingasheleli, sisebenza kuphela lapho i-blender ifakwe kahle
Izinsiza: Isikhiye sempompi esingavuzi
– Ukuhlolwa komkhiqizo we-juicer ehamba kancane i-Kalite KL-530:
Umthamo wejusi ungama-250ml, ulungele imindeni enamalungu angama-2-3
Amandla angu-200W, isivinini sokuzungeza esingu-200 rpm, ukucindezela okusheshayo, ukonga isikhathi
I-Smart reverse rotation kufanele ihlukanise izinsalela futhi amanzi kahle kakhulu.
Igcina u-100% we-flavour kanye no-90% wamavithamini esithelweni.
Uhlelo lokuhlunga insimbi engagqwali engu-304 luvikela ngempumelelo ukugqwala, ngaphandle kokukhathazeka ngensimbi egqwalile ethinta amathumbu kanye nempilo yonke.
Ingaphezulu lomzimba lipendwe ngopende we-UV, i-anti-scratch kanye ne-anti-dust
+ Ububi: I-blade izacile impela, ngakho ifaneleka kuphela ukukhama ukudla okuthambile nokuphekiwe. Izilimo eziyizigaxa eziqinile ezifana namazambane, izaqathe … kufanele uzicabangele lapho uthenga.
Inani: 1,749,999 won
2.2 I-Kalite KL-550
Uma umndeni wakho unamalungu angu-3-5, thenga i-juicer ehamba kancane ye-Kalite KL-550 ngokushesha! Idivayisi ihlanganiswe nobuchwepheshe obunelungelo lobunikazi “JMCS” ukuze kuqinisekiswe ukuthi wena nobathandayo nihlala niwajabulela amajusi amnandi, anomsoco nsuku zonke.
Amandla: 240 W
Ithubhu yokudla: 80 mm
Izesekeli: Insimbi engagqwali
Izinsiza: I-Kalite KL-550 juicer ehamba kancane ene-anti-drip spout, efakwe nembiza ka-ayisikhilimu
– Ukuhlolwa ngemuva kokusetshenziswa:
Ngenxa yokuhlanganiswa kobuchwepheshe obunelungelo lobunikazi “i-JMCS”, ijusi evela emshinini izogcina izikhathi ezingu-4 ngaphezulu kwama-Enzyme namaVithamini.
Imishini yokucindezela isikulufa igaya izinto zokusetshenziswa, ngaphandle kokusebenzisa ummese, ngakho-ke ayikhiqizi ukushisa, iqinisekisa ukuthi izakhi zesithelo azithinteki.
Ishubhu lokuphakelayo likhulu impela lifinyelela ku-8cm ngakho ungakwazi ukujusa isithelo sonke ngaphandle kokusisika.
I-juicer iphelile, inikeza ijusi izikhathi ezingu-1.5 ngaphezu kokujwayelekile.
Ifakwe i-Smartcap cap smart cap ukugwema ukuvuza okuphezulu.
Isikhathi sokuphumula ngemuva komsebenzi omude (imizuzu engama-30).
– Intengo: 2,499,999 VND
2.3 I-Kalite KL-565
Uma uthanda ukudla u-ayisikhilimu, uthanda ukwenza u-ayisikhilimu, khona-ke i-juicer ye-Kalite KL-565 ehamba kancane ilungele wena. Umshini uhlanganiswe nomsebenzi wokwenza i-ayisikhilimu.
Amandla kagesi: 220-240V / 50Hz
Isivinini: 60 RPM, ngokuhlehla
Izinga lomsindo: <70dB
Material: 304. insimbi engagqwali
Isikhathi sokugijima esiqhubekayo: imizuzu engama-30
I-juicer ayihlungiwe, i-oxidized, inciphisa ubumnandi
Ifakwe isembozo esihlakaniphile, izogcina ijusi ngokuphumelelayo esitsheni, ivimbele ijusi ukuthi lingachitheki.
Cylindrical feed tube, 7.6cm ububanzi, ungakwazi khama izinhlobonhlobo zokudla, imifino, nezilimo eziyizigaxa, izithelo
Isivinini sokujikeleza esinensayo esingu-60 rpm, ijusi eyengeziwe, ngokushesha ukuze kuqinisekiswe umsoco
Umshini awunayo i-jam phenomenon. I-pulp ikhathele kakhulu. Cishe awekho amanzi asele.
Umkhiqizo unenhlanganisela yomsiki epayipini lokudla. Ngakho nawe wonge isikhathi ukuze lula juicing.
Kulula ukuqaqa, kulula ukuhlanzwa
Umshini usebenza kahle, awuthinti wonke umuntu emndenini, ulungele kakhulu imindeni yasebekhulile nezingane
Isisindo esinzima impela, kunzima ukunyakaza
Ukukhama izithelo ezithambile ezifana namakhabe, utamatisi, kukhona isenzakalo samanzi amile phezulu angeke akhishwe noma afakwe udaka ngaphakathi. Nqoba ngokukhama ndawonye nezithelo ezinzima.
Ingxenye yempompi edonsa amanzi futhi ikhiphe okusele ine-gasket yerabha ekhishwayo, exhunywe ku-dc disassembler. Ngakho uma uyigeza, qaphela ukuthi ingalahleki
Intengo yomshini iphezulu impela uma iqhathaniswa namajusi adumile emakethe
– Intengo: 3,055,000 VND
2.4 Kalite KL 598
Lona umugqa omusha wama-juicer e-Kalite owethulwe ngasekuqaleni kuka-2021. Ijusi ye-Kalite KL 598 iheha abasebenzisi ekuqaleni kokuyibona ngombala wayo opholile, othambile we-turquoise. Lo mkhiqizo wenza indawo yakho yekhishi ikhanye futhi ibe yintsha.
Ngaphezu kwalokho, ngejusi ye-KL 598, ningakwazi ukukhama ijusi, wenze futhi ugaye amantongomane anomsoco ngesikhathi esisodwa! Lo mugqa womshini wokunyathelisa we-Kalite unamandla amakhulu afika ku-400W, afanele imindeni emikhulu noma amathilomu, amabha, izindawo zokudlela.
Amandla: 400 W
Ishubhu lokuphakelayo: 75 mm
Inombolo yezigayo: 1 mill
Amandla: 0.5 amalitha
Isigayo esikhulu: Ipulasitiki yekhwalithi ephezulu
Isesekeli: I-Titanium ne-PEI . shaft yomjovo wepulasitiki
I-Speed ​​​​knob: Inkinobho yokucindezela
Imodi ephephile: Isebenza kuphela lapho i-blender ifakwe kahle
Izinsiza: Ishubhu elikhulu lokuphakelayo, i-Anti-drip spout, Isitsha sika-ayisikhilimu esifakiwe, umlomo othela kakhulu ungaqoqa ujusi ezinkomishini eziphakeme neziphansi, zisebenze isikhathi eside.
Umthamo we juicer ungafika ku-400ml, i-juicer ehamba kancane ifanele imindeni enamalungu amaningi, amathilomu nezindawo zokudlela.
Umzimba wenziwe ngepulasitiki ye-BPA Free Tritan/ABS/PC engakhiqizi ubuthi, obuhlala isikhathi eside.
Ifakwe injini ye-DC ukukhulisa ukusebenza kahle kokucindezela kwe-pulp. Lena injini ehlala isikhathi eside kakhulu emakethe
Umkhiqizo ufakwe amanethi okuhlunga angu-3 ahlanganisa i-wire mesh encane, isihlungi sejusi, kanye ne-holeless mesh.
Izici eziningi ezikahle: ukukhama ukudla kwezithelo, ukugaya amantongomane, ukwenza u-ayisikhilimu
Lo mugqa udinga ukuphumula cishe amahora angu-2 ngaphambi kokuqhubeka, okuyinto ephazamisayo uma kunesidingo esiphuthumayo neziphuzo eziningi.
– Intengo: 5,540,000 VND
Ngenhla kunemininingwane enemininingwane ye-Kalite juicer ehamba kancane. Ngethemba ukuthi uzoba nokuhlolwa okuhlosiwe kwama-juicer enkampani ahamba kancane bese ukhetha umkhiqizo ofaneleka kakhulu.
Xem Thêm Top 5 máy ghi âm tốt, chuyên nghiệp nhất 2022 | Muasalebang
Top 10 món ngon Sa Pa ăn là ghiền | Muasalebang